About Us - Tianjin Zhizhi Iron & Steel Co., Ltd
Kupendwa Al Coil
Tianjin Zhizhi simbi & simbi co., Ltd hwagadzwa muna 2002, uye vakanyorwa muna Tianjin Airport Industry Park. The chikuru bhizimisi Zhizhi riri mumunda mukugadzira, kubudiswa uye kugovera kuti simbi zvigadzirwa. Products muzvikamu zvitatu: simbi ndiro, mapaipi simbi uye simbi rebar. Steel ndiro zvinosanganisira chando anokungurutsirwa simbi coils (CRC), inopisa akakungurutsa simbi coils (HRC), kwakakurudzira simbi coils (GI) uye prepainted kwakakurudzira simbi coils (PPGI). Zvikwepa Steel zvinosanganisira ERW pombi, dema zvikwepa pemvura, kwakakurudzira nyere, musono nyere, mapaipi chiwanikwa uye zvichingodaro.
We ugovere simbi chigadzirwa kune vose epamba uye mhiri kwemakungwa kumusika. Pamisika dzomunharaunda, tiri boka guru simbi zvigayo kusanganisira Baotou simbi boka, Hebei simbi boka, Tiantie simbi boka mumiririri. Nokuparadzira matani anopfuura 50,000 pamusoro CRC, GI uye PPGI ose gore. Yekwataigara mutengi vanopararira zvose pamusoro enyika muna Northern China, uye makachengeta yakareba pamwe nesu.
Boka redu kuenzana kufarirwa imupota uye ekisipoti mugore ra2008, uye aina basa iri kukura ikozvino. The chigadzirwa katarogu kuti ekisipoti inosanganisira CRC, GI, PPGI, Tinplate uye pombi simbi. Clients wokuEastern Europe, South America, Mideast uye Africa makasimbisa akatsiga uye kwenguva mabhizimisi ukama nesu. Tinovimbisa nemakasitoma zvedu hwakanakisisa, anonzwisisa mutengo uye nokukurumidza pakusununguka.
"Honest, Kuvimbika, Trust uye Ruremekedzo" Basa redu chokuratidza. Tiri kutarisira unokupai zvakanakisisa zvinhu uye mabasa ose zvedu vanoremekedzwa vatengi.
The takunda zvisamumirira mutambo pakati kambani uye vashandi, kambani uye vatengi ndiye kumhanya yedu chipfuro. Tinovimba zvatingaita kugoverwa kuti zvinakire yose muvanhu pashure kubudirira bhizimisi.